चर्चित युट्युबर भोजराज थापा चितवनबाट ले खिटिएपछि मध्यरातमा रुँ दै प्रहरी चौकीबाट लाइभमा आए – Gazabkonews
चर्चित युट्युबर भोजराज थापा चितवनबाट ले खिटिएपछि मध्यरातमा रुँ दै प्रहरी चौकीबाट लाइभमा आए,र खोले यस्ता रहस्यहरु, भोजराजले गरेका रहेछन् यस्तो गर्न नहुने काम
चर्चित नायिका वर्षा राउत यही वर्ष आमा बन्दै, लकडाउनको सदुपयोग गरेको भन्दै वर्षा र सन्जोगले यसरी बाँडे दर्शकसामु खुशी, संजोगले मलाई छोरो चाहिन्छ भन्दै जिस्किँदा वर्षाले मेरो पेटमा छोरी छिन् भन्दै संजोगसँग रिसाइन्, हेर्नुहोस् भिडियो
बुढेशकालमा विबाह गरे पनि छोराछोरी नपाएकी मिथिला शर्माले बनाइन् चर्चित कलाकार सरिता लामिछानेलाई छोरी, मिथिलाको जन्मदिनमा सरिता केक बोकेर आमालाई भेट्न पुगीन्, सरितालाई देखेर मिथिलाले आफ्नो बच्चा नभएको भन्दै भक्कानिएर रोइन्, सरिताले आँफु छोरी भएको र सँधै आइरहने भन्दा दुवै भक्कानिए, हेर्नुहोस् भिडियो
लार्ज, मीड र स्मल क्यापमा कुन कम्पनी पर्छन्? कुनमा लगानी गर्दा वेस्ट? यो वर्ष सबैभन्दा बढी क्यापिटल गेन कुन क्यापले दियो? : गएको एक वर्षको अवधिमा शेयर बजारका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी क्यापिटल गेन स्मल क्यापमा रहेका कम्पनीहरूबाट प्राप्त गरेका छन्।उनीहरूले गएको एक वर्षमा स्मल क्यापबाट औसतमा २३६.६७ प्रतिशत गेन गर्दै सबैभन्दा बढी क्यापिटल गेन गर्न सफल भएका हुन्।
क्यापिटल गेनकै आधारमा माइक्रो क्याप बढी क्यापिटल गेन दिने सूचीको दोस्रोमा छ। माइक्रो क्यापबाट गएको एक वर्षमा लगानीकर्ताले औसत १६३.९७ प्रतिशत क्यापिटल गेन गरेका छन्। क्यापिटल गेन कै आधारमा मीड क्याप तेस्रोमा छ। मीड क्यापबाट लगानीकर्ताले औसत १४०.७९ प्रतिशत गेन गरे।
उता सबैभन्दा कम क्यापिटल गेन दिनेमा लार्ज क्याप छ। उसको औसत गेन ९०.४३ प्रतिशत मात्रै छ। लार्ज क्यापभन्दा बढी मेगा क्यापबाट लगानीकर्ताले गेन गरेका छन्। उसले लगानीकर्तालाई औसत १५१.०४ प्रतिशत क्यापिटल गेन दिन सफल भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टकमा लगानी गर्दा कुन क्यापमा रहेका कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने विषय निक्कै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सूचीकृत कम्पनीको प्रतिकित्ता फेस भ्यालुले कुल शेयर सङ्ख्यालाई गुणान गरेर कम्पनीहरू कुन क्यापमा पर्छन् भन्ने निर्धारण गरिन्छ। जस्तै कुनै कम्पनीको प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँ दरका एक हजार कित्ता शेयर सूचिकृत छन् भने एक हजार कित्तालाई प्रति कित्ता एक सयले गुणान गरी आउने एक लाख नै उसको पूँजीकरण (क्यपिटलाइजेसन) हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजार पूँजीकरणलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। बढी प्रचलनमा भने तीन वर्ग पर्छन्। वर्गीकरणमा मेगा क्याप,लार्ज क्याप, मीड क्याप, स्मल क्याप र माइक्रो क्याप पर्ने गर्छन्। जसमा लार्ज क्याप, मीड क्याप, स्मल क्याप बढी प्रचलनमा छन्।उनीहरूको बजार पूँजीकरणको आधारमा कुन वर्गमा पर्ने हुन् भनेर कम्पनीलाई छुट्टाउने गरिन्छ।
मेगा क्यापमा पर्ने कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण कम्तीमा पनि दुई सस बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुनु पर्छ। लार्ज क्यापमा पर्ने कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण कम्तीमा १० बिलियन देखि दुई सय बिलियन सम्म हुनु पर्छ। मीड क्यापमा पर्न कम्पनीहरुले कम्तीमा पनि आफ्नो
पूँजीकरण दुई बिलियन देखि १० बिलियन सम्म पुर्‍याउनु पर्छ। तीन सय मिलियन देखि दुई बिलियन सम्म पूँजीकरण भएका कम्पनी स्मल क्यापमा पर्ने गर्छन् भने ५० मिलियन देखि तीन सय मिलियन सम्म पूँजीकरण भएका कम्पनी माइक्रो क्यापमा पर्ने गर्छन्।